Taxanaha SZR waa nooc ka mid ah cutubka sare ee saqafka sare ee qaboojiyaha 8.5m ilaa 12.9m laga bilaabo bartamaha-ilaa-dhamaadka-baska caadiga ah, tababaraha, baska iskuulka ama baska xira. Awoodda qaboojinta ee qaboojiyaha baska taxanaha ahi wuxuu u dhexeeyaa 20kW ilaa 40kW, (62840 ilaa 136480 Btu / h ama 17200 ilaa 34400 Kcal / h). Dhanka qaboojiyaha baska yar ama baska kayar 8.5m, fadlan tixraac taxanaha SZG.
Taxanaha SZQ waa nooc ka mid ah cutubka sare ee saqafka sare ee qaboojiyaha 8.5m ilaa 12.9m oo ka socda baska caadiga ah, tababaraha, baska iskuulka ama baska la sheegay. Taxanaha oo leh nooc heerkulkiisu sarreeyo ayaa la heli karaa. Awoodda qaboojinta ee qaboojiyaha baska taxanaha ahi wuxuu u dhexeeyaa 20kW ilaa 40kW, (62840 ilaa 136480 Btu / h ama 17200 ilaa 34400 Kcal / h). Dhanka qaboojiyaha baska yar ama baska kayar 8.5m, fadlan tixraac taxanaha SZG.
Taxanaha 'SC-D' waa nooc ka mid ah is-ku shaqeynta qaboojiyaha gawaarida xamuulka qaada oo loogu talagalay 7-10.5m gaari xamuul oo dhaadheer oo loo adeegsado gaadiidka-fog.
Taxanaha LMD ee qaboojiyaha baska tamarta cusub waa nooc ka mid ah saqafka hawo qaboojiye leh, oo leh hal aag soo noqosho hawo leh, iyo moodooyin kala duwan oo loo codsado basaska korontada laga bilaabo 8m illaa 12m Taxanaha LMD wuxuu taageeraa tikniyoolajiyad kala duwan oo ikhtiyaari ah, sida teknolojiyadda xakamaynta daruuraha, tiknoolajiyadda ka-hortagga dabacsanaanta sare, qaybta saqafka isku dhafan ee nidaamka maareynta kuleylka batariga (BTMS), tikniyoolajiyadda maareynta kuleylka gawaarida, tiknoolajiyada tamarta sare ee DC750, tikniyoolajiyadda yareynta biyaha uumiga, tikniyoolajiyadda sifaynta hawada ee baska dhexdiisa iyo kombaresarada isku-darka aluminium ee keydka u dhigta.
Taxanaha SC-T waa nooc saqafka ah oo si toos ah loogu rakibay qeybta qaboojiyaha gaariga xamuulka qaada ee minivan, van ama gaari xamuul ah. Waxay aad ugu habboon tahay baahinta magaalooyinka.